Xaq miyaan u leeyahay in aan waqtiga ku dhejiyo shaqaalaha xirmo maalmeed?
Posted by Tranquillus | Jan 28, 2021 | Shabakada
Xirmada Maalinta: shaqaale madax-bannaan oo ku jira abaabulka jadwalkooda
Xirmooyinka maalmo ka badan sanadka waxaa lagu soo gabagabeyn karaa:
shaqaalaha maamulka ee haysta, xaaladaha qaarkood, ismaamul ku saabsan abaabulka jadwalkooda; iyo shaqaalaha aan la go'aamin karin waqtigooda shaqada iyo kuwa leh madaxbannaani dhab ah abaabulka jadwalkooda.
Shaqaalahan sicirka sanadlaha ah ee go'an ee maalmo kuma xirna tirinta waqtiga shaqada saacado, ama ugu badnaan saacadaha shaqada maalinlaha iyo toddobaadlaha.
Marka shaqaalahan lagu daro jadwal u baahan joogitaankooda shirkadda, looma tixgelin karo inay yihiin fuliyayaal / shaqaale madaxbannaan sidaa darteedna waxay ku xiran yihiin heshiis sanadle ah oo xaddidan oo maalmo ah. Dhaqankan, sida ay sheegtay Maxkamadda Cassation, wuxuu khilaafsan yahay fikradda qaab-dhismeedka is-maamul.
ma, Kuma soo rogi kartid waqtiga boosaska shaqaalaha xirmo maalmeed.
Haddii aad saacado ku soo rogto shaqaalaha maalin kasta, looma tixgelin karo inay yihiin shaqaale madax-bannaan. Iyagu waa shaqaale isku dhafan oo hoos imanaya saacadaha shaqada ee wadajirka ah iyo qabanqaabada waqtiga dheeriga ah.
Xusuusin ahaan, ...
Xaq miyaan u leeyahay in aan waqtiga ku dhejiyo shaqaalaha xirmo maalmeed? July 10th, 2021Tranquillus
READ Talooyinka PowerPoint 2019: Shaxda Pie Animated
horeCalc Bilaash ah: Shaqada IF
socdaTusmada sinnaanta xirfadeed: fidinta guriga si loo sameeyo!
Xaq miyaan u leeyahay inaan weydiiyo qof shaqaale ah tirada dhibcaha ku qoran liisankiisa wadista?
Bixinta taageero gaar ah
Abuur Dukaankaaga Shopify-ka ee Drophipping
FRANCE 2030: Jean-Michel Blanquer, Élisabeth Borne iyo Frédérique Vidal waxay guddoominayaan fadhigii ugu horreeyay ee "waxbarashada iyo tababarka" ee guddiga hagidda wasaaradda ee Faransiiska 2030